Guddiga gurmadka abaaraha oo lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa – Radio Muqdisho
Guddiga gurmadka abaaraha oo lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa
Guddoomiyaha Guddiga abaaraha ee dalka iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ku jiraan odoyaal dhaqameed, waxgarad iyo ururrada bulshada rayidka ayaa maanta deeqda hal milyan oo ay dhiibtay dowladda Federaalka ee Soomaaliya gaarsiiyay guddiga aabaraha ee Soomaaliland.
Wafdiga ayaa markii ay gaareen magaalada Hargeysa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo guddiga abaaraha ee maamulkasi.
Guddoomiyaha Guddiga abaaraha ee dalka Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in socdaalkoodu uu la xiriirto sidii ay u gaarsiin lahaayeen kaalmo dhaqaale.
“Waa waajib Islaami ah, waa waajib waddani ah, waxaan nahay dad Walaalo ah, waana ku faraxsanahay inaan maanta idin soo gaarno oo aan idin guddoonsiino hal milyan oo doolar” ayuu yiri Sheekh Nuur Baaruud Gurxan.
Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah odoyaasha dhaqanka ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan marna iloobi doonin gurmadkii maamulka Soomaaliland ay kaga qeyb qaateen abaarihii ka jirtay Koonfurta Soomaaliya, haatana ay diyaar u yihiin in dhankooda ay gurmad ka geysanayaan dadka ay abaaruhu saameeyen.
Doorashada Hogaanka NUSOJ oo la shaaciyay “SAWIRRO”
Guddoomiyaha gobolka banaadir oo kormeeray waddooyin dib u dhis lagu sameynayo “SAWIRRO”
Guddoomiyaha gobolka banaadir oo kormeeray waddooyin dib u dhis lagu sameynayo "SAWIRRO"